प्रचण्ड माकुनेलाई जे’लनहाली शान्ति हुँदैन ! सेनापति रुक्माङ्गत कटुवाल ।(भिडियो सहित)
काठमाडौँ : नेकपा माओवादी केन्दका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक भविश्य सिध्याइदिने भन्दै मैदानमा उत्रिएका छन् । पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मा’ङ्गत कटुवाल
नेपाललाई हिन्दु’राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने भन्दै मैदानमा उत्रिएका छन् । प्रचण्डलाई बेलाबेलामा भुत जसरी तर्साउने कटुवाल राजनीतिमा आएपछि उनलाई गलपासो बनेको छ । नेपाली राजनीतिमा कटुवाल काण्ड च’र्चित छ ।
यसलाई प्रधानसेनापति प्रक’रण पनि भनिन्छ । धर्म निरपेक्षताको वकालत गर्ने प्रचण्डलाई यो विषयले तनाव दिएको छ । २०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई पदबाट हटाएर कुलबहादुर खड्कालाई प्रधानसेनापतिको नि’युक्तिपत्र नै दिएका थिए ।
तर, तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले निर्णय रोकेका कारण सेनापति कटवाल पदमै रहे । यो प्रकरणपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनले राजनीतिक रुपमा निकै ठूलो ध’क्का खान पुगे ।
यो घटनापछि प्रचण्ड माओवादीप्रति निकै अनुदार बने । उनले सेवानिवृत्त भएपछि पनि माओवादी र प्रचण्डवि’रुद्ध आफूलाई उभ्याइरहे । अहिले उनै रुक्मा’ङ्गत कटवाल हिन्दु राष्ट्र अभियानको शंखघोष गर्न पुगेका छन् । उनले ३ भदौमा हिन्दु धर्मगुरु र संस्थाहरुलाई साक्षी राखेर संयोजकका रुपमा हिन्दुराष्ट्र स्वाभिमान जागरण अभियानको शंखघोष गरेका छन् ।
कटवाल हिन्दु राष्ट्र अभियानमा लाग्नु अर्थपूर्ण छ । पूर्वप्रधानसेनापति कटवाल निडर परिचय बनाएका हुन् । त्यसमाथि उनलाई माओवादीको कटु आलो’चक मानिन्छ । प्रचण्डलाई उनले मुख्य प्रतिद्व’न्द्वी देख्दै आएका छन् ।
नेपालमा एकात्मक राजनीतिक प्रणा’लीबाट संघीय राज्य प्रणालीको स्थापनामा प्रचण्ड मुख्य हुन् । राजसंस्था हटाएर गणतन्त्र स्थापना गर्न उनकै मुख्य योगदान छ । हिन्दुराष्ट्र हटाएर संविधानमा धर्म’नीरपेक्ष राख्न उनैले प्रमुख भूमिका खेलेका थिए ।
त्यसैले हिन्दु’राष्ट्र पक्षधरको सक्रियता बढ्दा उनले धर्मनीरपेक्षता जोगाउनुपर्ने खुलेरै बोलेका छन् । बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले पनि धर्मनीरपेक्षताका् पक्षमा खुलेर बोलेका छन् । शिर्ष नेताहरुमा शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, महन्थ ठाकुरले धर्मनीरपेक्षताको पक्ष वा विपक्षमा खुलेर बोलेका छैनन् ।
शिर्ष नेतामा प्रचण्डले मात्र धर्मनीरपेक्षताको रक्षाका लागि बोल्दै आएका छन् । यता हिन्दुराष्ट्रका पक्षधरहरु विस्तारै सक्रिय भइरहेका छन् । यसले अब प्रचण्डको मुख्य चुनौती हिन्दुराष्ट्रका पक्षधर हुने देखिएको छ । हिन्दुराष्ट्र अभियानका संयोजक बनेर प्रस्तुत भएका कटवाल नै यो मुद्दामा मुख्य चुनौ\_ती बन्न सक्छन् ।
राजनीतिक वृत्तमा अहिले कटवाल नै किन हिन्दुराष्ट्र अभियानमा अघि सरे भन्ने विश्लेषण भइरहेको छ । विगतमा पनि प्रचण्डलाई धक्का दिन सकेकोले उनैलाई हिन्दुराष्ट्रका अभियन्ताहरुले विश्वास गरेको देखिन्छ । हिन्दुराष्ट्रको विपक्षमा खुलेर प्रस्तुत हुनेमा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई मुख्य हुने निश्चित छ ।
अन्य दलका शिर्ष नेताहरु पछि मात्र खुल्ने वा खुल्दै नखुल्ने लाइनमा छन् । उनीहरुलाई खुल्न वाध्य पार्न अभियान नै सारिएको देखिन्छ । नेपाली राजनीतिमा धर्मको मुद्दा जोडतोडले उठिरहँदा यसलाई बेवास्ता गर्न नसकिनेमा धर्मनीरपेक्षताका पक्षधरहरु पनि देखिएका छन् ।
यसले अब धर्मको मुद्दाले टकराव हुने निश्चितप्रायः छ । कटवाल यसका लागि अभियानका संयोजक बनेका छन् । यो मुद्दामा प्रचण्ड र कटवाल फेरि आमनेसामने हुने देखिदैछ । प्रचण्डका लागि फेरि कटवाल चुनौती बनेर आएका छन् ।
२०७८ भाद्र ८, मंगलवार २१:२८ गते 1 Minute 719 Views